यस्तो सम्बन्धले मलाई पागल बनायो । | .:: Pardeshi Life
गृह विचार यस्तो सम्बन्धले मलाई पागल बनायो ।
परदेशी लाईफ संवाददाता अशोक पोख्रेल - Mar 26, 2017
एक-अर्काको माया र सम्बन्धले नै यो सन्सार चलेको छ , यो सन्सार बनेको छ भनेर भनिन्छ, वास्तवमा हो रहेछ। सम्बन्धको नशामा झुमेर मानिसले सबै कुरा त्याग्ने गर्दछ,एकोहोरो हुने गर्दछ अनी हुँदा-हुँदा पागल सम्म पनी हुनेगर्दछ भनेको सुनेको थिए यो पनी हो रहेछ । यी र यस्ता माया र सम्बन्धका कुराहरुबाट म पनी टाढा रहन सकिन आज म पनी यही सम्बन्धको नशामा झुमेको छु, मेरा हरेक ब्यबाहारलाई नियाल्ने हो भने पागल झैं बनेको छु । कति पनी नढाँटीकन मेरो मनको सत्य कुरा म आज यसरी दिन बाध्य भएको छु ।
जब म मेरो मातृभूमि नेपाल छोडेर कर्म-भुमी कोरिया प्रस्थान गरे त्यतीबेला मैले २ वटा चिठी पनी लेखेको छु, पठाएको छु, लेख्ने यिनै मेरा यी २ हात अहिले साँचि बनेकाछन् । म गाँउको एक सोझो नेपालीको छोरो समय विताउँदै जाने क्रममा यो साथी अनी माया र सम्बन्धसंग जब परिचित हुँदै गए, मलाई झन कौतुहलता बढ्नथाल्यो, म अझ रमाउदै झन नजिकको साथी बन्ने अभ्यासमा ब्यस्त हुनथाले । यसरी खेल्दै र रमाउँदै जानेक्रममा पत्तै भएन यो सम्बन्धको नशामा फसेको । यहाँ भन्दा नजिकको र ठुलो साथी कोहीपनी हुनसकेन मेरो जिवनमा ।
कोरियामा विभिन्न कार्यक्रमहरु हुने गर्दथे म साँच्चै नै सक्रिय भएर सहभागी हुने र रमाउने गर्दथिए तर मलाई कार्यक्रम स्थल सम्म लैजाने साथै कार्यक्रम हुने र भएको बारेमा जानकारी दिने समेत अरु कोही नभएर उही साथी।मेरो घरपरीवार, आफन्त, देश-विदेश सबैसंग कुराकानी गर्न, एउटा दरिलो माध्ययम कै रुपमा सहयोग गर्ने साथी पनी उही । यसरी मेरो हरेक पलमा मसंगै भएर, म संगै रहेर सहयोगी साथी बनेर सम्बन्ध स्थापित गर्न पुगेपछी म चुपलागेर बस्न मिलेन पनी र भएन पनी । भनिन्छ नी एक हातले मात्र ताली बज्दैन, एकहोरो माया र सम्बन्धले मात्र जिवन चल्दैन यस्तो त पक्कै हुन दिन भएन । यही सोचका साथ म पनी अघी बढे अनि हाम्रो माया र सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउ तिर लागी परे ।
अहिले हाम्रो सम्बन्ध भएको करिब ८ बर्ष जति भएछ तर यो समय सम्म आईपुग्दा हामी यती नजिक भएछौं की सायद यो सन्सारमा हामी भन्दा नजिक कोही पनी नहोला । किन की मैले पनी उही साथी र सम्बन्धको विश्वासमा नै रहेर होला मेरा हरेक दुख:सुखका वेदनाहरु पोख्न र सेयर गर्न पछी परीन । हुन त म एक किसीमको ढुक्क भएको छु अनि स्थापित सम्बन्ध र साथी भएकै कारणले सबैबाट नजिक हुनसकेको छु, देश-विदेशका हरेक कुना-कुनामा पनी पुग्न सकेको छु । त्यसैले मैले भन्नै पर्छ यस्तो साथी र सम्बन्ध मेरो लागी एउटा सौभाग्य पनी बनेको छ । यस्तो साथी र सम्बन्ध पाएकोमा मलाई कुनै चित्त दुखाई छैन जे हुनुपर्थ्यो भयो म यसमा खुशी छु । हाम्रो सम्बन्ध अझ दरीलो होस, कसैले विगार्न नसकोस भन्ने कामना पनी गर्दछु ।
तर , भनिन्छ नी अमृत पनी धेरै खायो भने विख हुन्छ रे अनी विख पनी थोरै खायो भने औषधीको काम गर्छ रे ..। हामी दुईको माया र सम्बन्ध यस्तै हुनपुग्यो , चाहिने भन्दा पनी बढी नजिक हुनपुगीयो, काम गर्दा पनी संगै हुनुपर्ने,विदाको दिन अर्थात अलि कति समय निक्लदा पनी संगै हुनपर्ने, कुनै कार्यक्रममा जाँदा पनी संगै हुनपर्ने, खाना खाँदा पनी संगै हुनुपर्ने,ओछ्यानमा सुत्दा पनी संगै हुनपर्ने हुँदा-हुँदा टुवाईलेट र वाथरुममा पनी संगै हुनपर्ने यो चैं अति नै भयो । यस्तो किसिमको हाम्रो सम्बन्धले मलाई पागल नै बनायो । हामी भोग्ने र गर्नेलाइ त असजिलो बनायो नै देख्नेलाई पनी लाजै भयो ।
सिमा भन्दा पनी पर रहेर सम्बन्धको यस्तो नशामा पुगीयो अब दोष मैले कसलाई थुपारौं ..!! यसै कारणबाट मेरो घर-परिवारबाट गाली खान पर्यो, घर झगडा सम्म पनी हुन पुग्यो । आफन्तहरुलाई समय दिन सकिन, कयौं साथी-भाईलाई बोलेको बचन पुरा गर्ने सकिन, थुप्रै यस्ता महत्वपुर्ण कामहरु गर्न नै भ्याईन । अब यो सम्बन्धबाट टाढा रहन्छु भनेर धेरै कसम खाएको पनि हो धेरै बाँचा गरेको पनी हो तर मैले सकिन,मैले पुकारेको प्रतेक भगवानको नामले पनी केही लागेन । त्यसैले यस्तो सम्बन्धको नशाबाट छुटकारा पाउन अब कुन भगवानको नाम जपौं भनेर सोचिरहेको छु । त्यसैले म चाहान्छु आफु यस्तो सम्बन्धको नशामा फसेपनी अरुको बेलैमा बिचार पुगोस ।
यती कुराहरु भनिसक्दा पक्कै पनी हामी सबैलाइ अनुमान गर्न सजिलो हुनेछ अनि हामी सबैले जाने-भोगेको नै कुरा हो यो, मात्र मेरो प्रस्तुतीको शैली फरक आएको छ । मलाई यस्तो सम्बन्धको नशामा बसाउने मेरो रात- दिनको सहयोगी साथीको रुपमा परिचित साथीको नाम बताउनु भन्दा पहिले विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिक चाल्सडार्विनलाई सम्झन मनलाग्यो । त्यो वेला विज्ञानको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दैजाने क्रममा चाल्स डार्विनले एउटा ढुङ्गालाई हेरेर, प्रयोग गरेर सिद्धान्तको जन्मदिंदै भन्नुभएको थियो रे – “ढुङ्गा पनी सजीव हुन्छन, ढुङ्गा पनी साथी हुन्छन ” ।
यहाँ त्यस्तै, त्यस्तै भएको छ यसरी मलाई हरेक पल भुल्याउने साथी अनि यसरी बसेको सम्बन्ध अरु कोही संग नभएर हामी सबैको परिचित साथी त्यही फेसबुक रहेको जानकारी गराउँदछु । किनकी अलिकती समय भयो की वा कुनै काम गर्दैभए पनी हाम्रो नजर फेसबुकमा नै पुग्न गयो । जब म फेस बुक संग परिचित भए मेरो दिनचर्या यसरी नै वित्दै गयो, समय जति यसैमा बढी गयो,मेरो सबैभन्दा नजिकको सजिलो साथी त फेसबुक नै भयो, यो सम्बन्ध साँच्चै अचम्मको रहयो । यसो भएता पनी फेसबुक प्रयोग गर्नु र हामीले सम्बन्ध बढाउनु नराम्रो कुरा भने चैं हैन तर यसको चाहिने भन्दा बढी प्रयोगले पारेको प्रभाव र असरको बारेमा जानकारी गराउने एक फरक शैली र प्रयास हो यो । त्यसैले हामी सबैले फेसबुकको उचित सदुपयोग गरौं तर दुरुपयोग नगरौं साथै दैनिक ब्यबाहारमा असर नै पर्ने गरीको प्रयोग पटक्कै नगरौं ।
प्रथम डेउ कप फुटबल- २०१७ को लागि टिम दर्ता शुरु ।